COP 21: Nasehon’ny Amerindianan’i Rio Negro avy ao Brezila ny fanisanandro ara-toetrandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2016 16:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, русский, Español, Română , Deutsch, Ελληνικά, Português
Ireo karazam-potoana ananan'ny vahoaka teratanin'i Rio Tiquié
Nandritra ny COP21 ny Ivontoerana Sosialy-Ara-tontolo Iainan'i Brezila (ISA), miara-miombon'antokoa amin'ny InfoAmazonia, no nanolotra tao Parisy ny fanisan'andron'ny teratany mampiseho ireo karazam-potoana mety amin'ny fanaovan-javatra ao rio Tiquié. Ity asa ity dia vokatry ny fikarohana nataon'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana sy ireo fikambanana amerindiana miaina amin'ny riandrano ambonin'i Rio Negro avaratra andrefan'ny fanjakana Amazonas, ao anivon'ny ala amazoniana, ao amin'ny sisintany kolombiana.
Tamin'ny fiasana miaraka amin'ny ISA, dia natolotry ny vahoaka teratanin'i rio Tiquié ny voka-pikarohan-dry zareo izay nahafahana namantatra ao amin'io lemaka amoron-drenirano io ny fotoam-panjonoana, fotoam-pihazana, fotoam-pahavokarana ary ny fotoam-pambolena. Ireo fiverimberenam-potoana ireo dia mifandraika amin'ny singa voajanahary voatondro manokana tahaka ny fotoanan'ny rano sy ny fipetrapetraky ny kintana. Ireo ango-tahiry ireo dia nangonin'ny ekipa mpanao fikarohana sy ireo mpiasa mpampifandray nosafidian'ny isam-pokonolona.
Ity fikarohana ity, izay mifototra amin'ny fahalalana ny kolontsaina, dia mety ahafahana mahazo ireo singa manondro ny fiovan'ny toetrandro ao an-toerana amin'ny alalan'ireo fiantraikany amin'ny rafitontoloiainan'i Rio Tiquié sy ny lemaka ao aminy. Iray amin'ny tanjon'ity asa ity ny fiarovana ny fiarovana ny tontolo manan'aina ao amin'ny faritra avon'i Rio Negro.
Ny habaka amin'ny fiteny portiogey sy anglisy dia azo tsidihina ato.